Yenza imigca yentsontelo ngeGlobal Mapper -Geofumadas
Yakha intambo kunye ne-Global Mapper
NgoJuni, 2011 Okufumaneka, Topography
I-Global Mapper yenye yeenkqubo ezingaqhelekanga, ezixabisa kancinci kakhulu ukuba ziqhekezwe kwaye ngenxa yeso sizathu zihlala zingaziwa. Into endizakuyenza kulo msebenzi bendikhe ndazenza nezinye iinkqubo ngaphambili:
Con Bentley Site... kwandithatha ixesha elide, akukho zifundo
Con AutoCAD Civil 3D... ewe wandinika unako, kodwa ekugqibeleni ndenza oko.
Con Softdesk 8... Ndiyayithanda, ndibi kakhulu ndasebenzisa iifayile ze-14 zedatha
Con GIS asibonise... kulula, kodwa akukho nto eninzi
Con ArcGIS... okwenzayo kodwa ufuna i-3D Analyst
Con Uqhagamshelwano... unako, kodwa unethamsanqa kunye neDEM Google Earth
Con Cad civil... ilula kakhulu kwaye iyasebenza
Kuyinto ehlekisayo, kunye ne-Global Mapper eyenziwe nje kwii-3:
1. Ngenisa idatha
Ifayile / ukuvula iifayile ze-ASCI zombhalo. Kuyamangalisa ukuba zingaphi iifomathi ezamkelwa yile nkqubo, kubandakanya i-dgn V8. Kule meko ndisebenzisa ifayile enokongezwa .xyz
Emva koko sikhetha ukuba idatha izisa kuphela amanqaku, hayi imigca. Ekuqaleni, iyabuza ukuba sifuna ukuyinika imbonakalo yelizwe xa isiza kwiifayile ezingenayo, iyenza kakuhle, iyasivumela ukuba simisele ngokungagqibekanga esisisebenzisa rhoqo.
2. Yenza imodeli yedijithali
Nanku kuphela kukhethwe kwinqanaba iziqendu, ifayile yeengongoma esiye zangenisa, senza iqhosha elifanelekileyo kwaye sikhetha ukhetho Yakha igridi yokuphakama kwi data vector.
3. Yenza imigca ejikelezayo
Ngenxa yoko, kukhethwe Ifayile> Qalisa iiKhonkco.
Akunakuba lula oko. Ukuyibonisa kwi-3D, cofa nje iqhosha kwaye ngonqakrazo olunye kukuphakanyiswa okubaxekileyo okanye okucothayo, okuthi kwezinye iinkqubo kube sisinye ubunzima.
I-Global Mapper yinkqubo entle, ayenzi yonke into kodwa into eyenzayo ifezekiswa ngokulula. Nangona ukuphatha ujongano lwayo ngandlel 'ithile kufutshane kwaye uncedo lwayo lubi kakhulu, iitutorial ezikhoyo zilungiselelwe ngabasebenzisi.
Emva koko, ukuvelisa iphrofayili, kwenziwa nge-3D yePath Profile tool, senza uhlangothi olusezantsi kwimephu kwisicwangciso kunye kwaye iqhosha le mouse.
Inomdla kwaye ilula, iprofayili ingaba yi-polyline. Eyona nto intle kukuba, awunyanzelekanga ukuba wenze ulungelelwaniso oluninzi kwinkqubo, kuba inkqubo ibala uluhlu kwaye ilinganise isikali esime nkqo nesithe tye.
Nangona ziyakwazi ukuchazwa ngesandla.
... Ndichitha ixesha elihle ngifuna indlela yokutshintsha loo mbala wecala othukuthelayo ... ukwenziwa kwimenyu jonga> umbala ongasemva....
Khuphela i-Global Mapper
Post edlulileyo«Ngaphambilini Bonisa iifayile zamva nje, iLizwi kunye ne-Excel
Post Next I-Geomap Geobide Beta i-3, ibukeka iluthembaOkulandelayo »
Iimpendulo ze-13 "zenze imigca ye-contour nge-Global Mapper"
Ndifumana imigca echanileyo, andiyazi indlela yokwenza iindondo, umntu uyazi?
kusasa ekuseni ukubona ukuba unokunceda, ndenza imifanekiso kwi-google yomhlaba kwi-mapper yehlabathi kodwa xa i-curves iveliswa ayinakutyeki njengoko kufanele ukuba yimigca endaweni yeendwangu endifanele ndiyenze ngayo, mbulela
Ukwenza imigca yentsontelo kwinguqulelo engu-15.0, yiya kuHlahlelo -Ukwenza iiKhontrakthi.
Ndiyathemba ukuba ukhonza umntu.
indlela iDTM eveliswa ngayo kwimbuyekezo, siyabonga
Andicingi ukuba ungakwenza oko nge-Global Mapper.
Sawubona, ndifuna ukwazi ukuba ndingayithumela njani izakhiwo kwi-3D ukuya kwi-Google emhlabeni evela kwi-Global Mapper
bonwaba bahlobo i-cosulta Ndiya ku-10 inguqulelo. kodwa andiyazi indlela yokubeka i-SCALE ndiyathanda ukuvelisa amacenge amgangatho
marisol espinoza uthi:
kuba xa ndivula iifayili yithunyelwa kwi-maper yehlabathi jikelele, ndiyivula kwaye ndiyakwazi ukuyijonga kuphela kwiphepha loyilo kodwa kungekho kumzekelo
Sebenzisa uqikelelo lwe-UTM kunye nedatha oyithumelayo iya kuchazwa ngokwendlela oyifunayo kwi-AutoCAD. Ukuba usebenzisa ii-geographic ulungelelwaniso azizukukusebenzela.
Ndinombuzo ngalenkqubo ... okanye uhlobo oluthile lwesalathiso kunye nolungelelwaniso, kuba xa ndizithumela ngaphandle kwi-dwg andinakukuyibeka nezinye iimephu.
Ukucaciswa… !! Ndinemephu yasezidolophini kodwa ngaphandle kwamagophe, le nkqubo iyazivelisa kodwa andikwazi ukuzihlanganisa kunye nolungelelwaniso okanye izingqinisiso .. Enkosi ..!
Sonia Morera uthi:
Ndizama ukwenza imizila yenkalo kwi-Global Mapper ukuba ndingayithenga. Xa ndikhetha umthombo wedatha kwi-intanethi, andinakuyilanda. Ndikhe ndakhele imephu engatshoyo ukuba ibhaliswe ukuba ibhaliswe.
Ngaba kuya kubakho ukuhlaziywa kwiqela lam?, Ngaba kuya kubhaliswa? Ndicinga ukuba kuza kuqala, kodwa oko kuyenzayo kukuba ibhloko
Ndiyenzile nge-Global Mapper engu-10, andazi ukuba iinguqulelo zangaphambili bezizixhasile na. Nangona lo mzekelo wenziwe nohlobo lwe-11.
Andizange ndicinge ukuba inokwenziwa nale nkqubo. Ndiyenzile ngeArgGis. Umbuzo wam, yiyiphi inguqulo onokuyenza le sicelo? Ukubulisa